Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: Gaazexeessaan OMN – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsAjjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: Gaazexeessaan OMN
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: Gaazexeessaan OMN
Ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaa: Gaazexeessaan OMN Guyyoo Waariyoo to’annoo jala oole
Gaazexeessaan OMN Guyyoo Waariyoo kan ajjeefamuu isaa torbee tokko dura Haacaaluu Hundeessaa waliin gaaffiifi deebii taasise hidhamuu maatiin isaa BBCf mirkaneessan.
(bbcafaanoromoo)–BBCn akka maatiirraa odeeffateetti, ”qaamoleen uffata Poolisii humna addaa Oromiyaa uffatan,” Jimaata naannoo sa’a 6 Guyyoo fudhatanii deemaniiru.
”Poolisoota hidhatan lakkoofsaan shan yookaan jaha tahan keessaa kanneen siiviilii uffatanis turaniiru,” jedhu maatiin dubbisne.
Qaamoleen nageenyaa kunneen gara iddoo jireenyaasaanii Finfinneetti argamutti dhufuun gaazexeessaa kana qabanii deemuu maatiin ni dubbatu.
Maatiin eessa akka geessaniifi gaaffilee garagaraa gaafachuuf, akkasumas duukaa bu’uuf yaalluus ”meeshaan nu dorsisuun nutti himuuf heyyamamoo hin taane” jedhaniiru.
Ajjeechaan artiist Haacaaluu Hundeessaa gaaffiif deebii inni yeroo dhumaatiif OMN waliin taasisee tureen akka walqabatu Abbaan Alangaa Waliigalaa Federaalaa ibsa yeroo garaagaraa kennaa tureen himee ture.
“Dhugaa Haacaaluu sabaaf dhiyeessine malee ‘qalmaaf hin qopheessine”’
Pireezidantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Adoolessa 02 guyyaa sirni awwaalchaa Haacaaluu Ambotti raawwatame TV irratti bahuun ‘OMN irratti dhiyeessanii qalmaaf qopheessan’ jechuun dubbachuun ni yaadatama.
Gaazexessaan Guyyoon turtii torban darbe BBC waliin taasiseen, “af-gaaffiin sun Art. Haacaaluufi saba bal’aa walitti fidee dhugaan Haacaaluu akka mul’atuuf gahee olaanaa tapahatee jedheen yaadaa” jechuun dubbata.
“Dhugaa Haacaaluu sabaaf dhiyeessine malee Haacaaluu qalmaaf hin qopheessine” jechuunis dubbata.
Abbaan Alangaa Haacaaluun gaaffiifi deebii gaazexeessaa Guyyoo waliin taasise qaamni Shanee jedhamu isa doorsisaa jiraachuu bakka ibsu keessaa kutee tamsaasuu hime
Gaaffiif deebiin guutuun sa’aa tokkoofi daqiiqaa 11 kan dheeratu ta’uus OMN garuu gaaffiifi deebii kana keessaa muree kan tamsaase daqiiqaa 47 ta’uus abbaan Alangaa ibsa torban dabre keessa kenneen beeksisee ture.
‘’ABO Shaneerraa irra deddeebiin dorsifni ajjeechaa irra gahaa akka ture artistichi dubbatus kun ta’e jedhamee keessaa cite hafeera’’ jedhan aanga’aan waajjira Abbaa Alangaa Obboo Fiqaaduu Tsaggaa.
Gaazexessaa Guyyoo Waariyoo garuu Haacaaluun gaaffiif deebii san keessatti maqaa shanee gonkumaa hin kaafnee jechuun BBC’tti himeera.
Gaaffiif deebii citee hafe jedhamee miidiyaalee mootummaa irratti tamsaafame irrattis artiistichi yoo kana jedhu hin dhagahaamu.
Gaazexeessitoota OMN keessaa gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa hidhaa akka jiru guyyootaan dura gabaasnee turre.
Guyyoota muraasa dura kan dubbisne daariktarri OMN Girmaa Guutamaa erga miidiyichi cufamee gaazexessitootni sodaa keessa waan jiraniif bilbila cufachuun dhokatanii akka jiran himee ture.
Mootummaan OMN sabaa fi amantaa jidduutti jibba labsuun walitti bu’iinsaaf kakaasaa ture jechuun himata.
Obbo Girmaan garuu kuni dhara ta’uufi cufamuun OMN ergama siyaasaa qabaachuu hima.
ODUU Hatattama : Galaalchessaan OMN Guyyoo Waariyoo to’annoo jala oole
Ethiopia’s influential diaspora split on Abiy